Maktabadaha - InfoFinland
Nolosha Finland > Waqtiyada firaaqada > Maktabadaha
Dhammaan magaalooyinka dalka Finland waxaa ku yaal maktabad ay degmadu ama magaaladu leedahay. Maktabadu waa meel laga amaahan karo buugaagta, lagu akhrisan karo wargeysyada, lagu isticmaali karo kombuterka, wax lagu baran karo ama looga qayb geli karo dhacdooyinka ama nashaadaadka kala duwan.
Maktabadda waxaa sidoo kale laga yaabaa in lagu qabto saacadaha sheeko-xariirta iyo geymam loogu talogalay caruurta.
Maktabadda dhexdeeda waxaa in badan ku yaal hoolka wax akhriska. Hoolka wax akhrisku waa meel degan oo aan sawaxan lahayn oo ku habboon wax akhriska ama tusaale ahaan ka shaqaynta duruusta cod la'aanta ah.
Waxaad sidoo kale heli kartaa hagitaan la xiriira xagga isticmaalma kombuterka, sidoo kalena maktabadaha qaarkood waxaa lagu qabtaa kafeteriyooyinka luuqadda oo af Finnish ah.
Macluumaadka maktabdaha waxaad ka heli kartaa adeegga shabakada Internetka ee kirjato.fi.
Adeegga shabakadda ee maktabaddaFinnish | Iswidish | Ingiriis
Finland waxaa ku yaal maktabado cilmiyeed, maktabado macaahiddu leedahay iyo sidoo kale maktabado kala duwan oo khaas ah. Kuwaas isticmaalkooda waxaa laga yaabaa inuu leeyahay xadidaadyo, laakiin inta badan dadka oo dhan ayey u furan yihiin.
Amaahashada awgeed waxaad u baahantahay kaarka maktabadda. Kaasna waxaad ka heli kartaa maktabadda. Xasuuso inaad horay u sii qaadatid waraaqaha aqoonsiga oo sawir leh. Haddii aadan haysan waraaqaha aqoonsiga ee Finnishka, si kumeel gaar ah ayaad u heli kartaa kaarka maktabadda.
Kaarka maktabaddu waa bilaash. Haddii aad lumiso, waxaa qasab kugu noqonaysa inaad kaarka cusub lacag ka bixiso.
Markii aad guurtid, cinwaankaaga cusub ogeysii makatbadda. Haddii aad u guurtid degmo uusan kaarka maktabaddu ka shaqayneyn, waxaa kula gudboonaanaysa intaad kaar maktabadeed cusub ka dalbato magaaladaada cusub maktabaddeeda.
Amaahashada walxaha maktabadda
Maktabadaha oo dhan waxay leeyihiin bogagga internetka, halkaas oo aad ka raadsan karto macluumaad la xiriira waxyaabaha yaala maktabadda, iska markaasna aad ka cusbooneysiisan kartid walxihii aad horay u amaahatay, isla markaasna aad ka qabsan karid buugaag ama walxo kale.
Haddii aad raadineysid buug gaar ah, waxaad cawinaad weydiisan kartaa shaqaalaha maktabadda.
Buugaagta waxaa sidoo kale laga amaahan karaa gaariga maktabadda ah.
Waqtiga amaahdu sida badan waa hal bil. Xasuuso inaad waqti wanaagsan gudihiis aad ku soo celiso buugaagta aad amaahatay ama aad ku cusbooneysiiso inta uusan waqtiga amaahdu kaa dhicin. Amaahda lala soo daaho waxaad ku mutaysanaysaa inaad bixiso lacagta la soo daahista. Lacagta la bixinayo inta ay le'eg tahay waxay ku xiran tahay hadba tirada buugaagta aad la soo daahday amaahdooda iyo inta maalmood oo aad buugaagta la soo daahday.
Waxaad maktabadda ka amaahan kartaa buugaag akhriskoodu fudud yahay, kuwaas oo lagu qoray luqada finnishka oo fudud. Waxey sidoo kale ku haaboon yihiin barashada luqada finnishka.
Maktabada waad ka amaahan kartaa sidoo kale wargeysyada, buugaagta netka, cajaladaha CD iyo DVD
Maktabadda luuqadaha badan
Maktabadda luuqadaha badan waxaa laga helaa walxo ama macluumaad ku qoran in kabadan 80 luuqadood. Maktabadda waxay ku taalaa Helsinki Pasila. Maktabada luuqadaha badan buugaagteeda ama cajaladeheeda waxaa laga deyman karaa meel kasta oo ka mid ah Finland. Waxaad shaqaalaha maktabadaada ka dalban kartaa inay kuu dalbaan walxaha ama buugaagta aad doonaysid. Macluudka dheeraadka ah ee la xiriira maktabadda luuqadaha badan buugaagta ama walxaha yaala waxaad ka heli kartaa bogagga maktabadda ee Helmet.fi ee Helsinki iyo agagaarkeeda.
Walxaha shabakadda internetka
Maktabaddda elektroniga ah (eKirjasto) waxaad ka heleysaa walxo elektronig ah, sida buugaagta, wargeysyada iyo filimaanta. Qoyb ka mid ah walxaha maktabada elektrogigu waa walxo xor ah oo ku jira shabakadda internetka, qaarna waa kuwo akhriskoodu u baahan yahay isticmaalka kaarka maktabadda iyo PIN-koodka kaas la xiriira.
Maktabada eletroniga ahFinnish | Iswidish | Ingiriis
Adeegga- weydii shaqaalaha maktabadda
Adeegga weydii shaqaalaha maktabaddu wuxuu ka jawaabayaa su'aal kasta. Waxaad su'aalahaaga oo ah Finnish, Iswidish ama Ingiriis ku reebi kartaa foomka shabakadda internetka. Jawaabta waxaa laguugu soo dirayaa e-mailkaaga, waxaana lagu soo daabacayaa adeegga shabakadda internetka.
Adeegga internetka ee waydii shaqaalaha maktabadaFinnish | Iswidish | Ingiriis
Kirjastokaista: Maktabadda luuqadaha badan